အချိန်ကောင်းနှင့်စားသုံးမှုဝန်ကြီးအဲလ်ဘတ်တိုGarzónကကြေငြာလိုက်သည် သူတို့ကလုယက်သေတ္တာများအပေါ်အလေးအနက်ကန့်သတ်ထားလိမ့်မယ် ဒါမှမဟုတ် loot box များကဲ့သို့ခေါ်ဆိုမှု။ ၎င်းတို့သည် freemium ဂိမ်းများ၏ ၉၀% နီးပါးရှိပြီးကစားသမားများကိုစနစ်တကျတိုးတက်စေရန်သူတို့ကိုဖွင့်ရန်ရှုတ်ချသည်။
အပြင်က စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသည်စွဲလမ်းစေပြီးမျိုးစေ့ကိုကြဲသည် ဒါကြောင့်လူငယ်ကစားသမားတွေက Bookmaker တွေကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်မြင်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်လည်းကြော်ငြာများကိုကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။
ရည်ရွယ်ချက်မှာလုယက်သေတ္တာများကိုထိန်းညှိရန်ဖြစ်သည် အလွန်အမင်းကစားသမားများကတန်ဖိုးထားဖြစ်ကြောင်းအရာဝတ္ထုရှိသည် သို့သော် box များပိုမိုဖွင့်ရန်အားပေးရန်အတွက်အလွန်နိမ့်သောရာခိုင်နှုန်းအညွှန်းကိန်းဖြင့်၎င်းနည်းသည်ရာခိုင်နှုန်းနည်းပါးသောအလောင်းအစားများကိုသူတို့၏နည်းစနစ်ကိုပိုမိုနီးကပ်စေသည်။
အဲလ်ဘတ်တိုGarzónကိုယ်တိုင်ကောက်ယူသကဲ့သို့ Loot Box တွေဟာဆိုးတဲ့စနစ်တစ်ခုပါ အထူးသဖြင့်အရွယ်မရောက်သေးသူများတွင်လောင်းကစားလုပ်ခြင်းကိုလှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
ထိပါ တ ဦး တည်းရှိနိုင်သည်သောကံ၏ ၎င်းသည်ယဉ်ကျေးသောလူတစ် ဦး ကိုနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအမြစ်တွယ်စေသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ခြားပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာ Fortnite ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဇာတ်ကောင်အတွက် ၀ တ်စုံအသစ်ဒါမှမဟုတ် Clash Royale ရှိကဒ်အသစ်ကိုရရှိနိုင်မလားဆိုတာစမ်းကြည့်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။
ထို့အပြင်ဗီဒီယိုဂိမ်းများတွင် 'loot box' ကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်လိမ့်မည်ဟုသတင်းများကဆိုသည်။ မကောင်းသောလောင်းကစားခြင်းကိုအားပေးသည်။ https://t.co/t3fb8rZlyb
- Alberto Garzón? (@agarzon) ဖေဖေါ်ဝါရီလ 28, 2020
ဒါကအတိုင်းအတာ ဘယ်လ်ဂျီယံလိုအခြားနိုင်ငံတွေကိုလိုက်နာပါ ပြီးတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာလုယက်သေတ္တာတွေမသုံးဖို့တားဆီးထားတယ်။ ၀ န်ကြီး၏စကားလုံးများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်လည်ရယူသည်။ ၎င်းသည်မှားယွင်းသောစနစ်ဖြစ်သည်။ နှင့်ဂိမ်းများစွာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရန်အမြစ်တွယ်နေတဲ့စနစ်တစ်ခု; ဒီစာမျက်နှာကိုသွားပြီးငါတို့ Fortnite နှင့် PUBG Mobile တို့ကစားသောဂိမ်းများ။
အမှန်တရား တိုင်းပြည်တစ်ခုမှအစိုးရတစ်ခုသည်ဤဝေါဟာရများနှင့်ပြောဆိုနေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းသည်အံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည် သူတို့ဘယ်လိုအနိုင်ရဖို့ရည်မှန်းချက်အတွက်ရည်မှန်းချက်ထားချင်တယ် သင်ပေးဆောင်ပါကသင့်လျော်သောတိုးတက်မှုကိုကြိုးစားရန်သူတို့၏နေ့စဉ်အချိန်ကိုဖြည့်ထားသောကစားသမားများထက်မရေမတွက်နိုင်သောအားသာချက်များရှိလိမ့်မည်သည့်ဂိမ်းများ။
ဟုတ်တယ်၊ အချို့ Freemium အကြားခြားနားချက်ရှိပါတယ်။ အလှကုန်ပစ္စည်းများကိုထိုအိတ်များသေတ္တာများထဲမှရယူပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ avatar ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ရန်အခြားအကြောင်းပြချက်မရှိသော freemium ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်လာနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်အဆိုးဆုံးကတော့သင့်ကိုအထူးစွမ်းရည်တွေရဖို့ဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုဖို့မဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့ရှားပါးပစ္စည်းတွေရဖို့ခွင့်ပြုတဲ့သူတွေ။
La ဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းသည်ယူရို ၁.၅၃ သန်းကျော်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်လစာ ပေး၍ အနိုင်ရသောကစားသမားများဖြစ်ပြီးစားသုံးမှုအတွက်လုပ်ဆောင်မည့်အစီအမံအသစ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အလေးအနက်ကန့်သတ်မှုများပြုလုပ်လိုသောကြောင့်ဤမှားယွင်းသောအပြုအမူများနှင့်ဂိမ်းစက်ကိရိယာများကိုရပ်တန့်ရန်သင့်လျော်သောလုပ်ဆောင်မှုများကိုပြုလုပ်သည်။
ဒီနေရာမှာဘယ်သူမှမလွတ်မြောက်ပါဘူးထို့အပြင် Nintendo ကပင်မိုဘိုင်းဂိမ်းများကိုတီထွင်သည့်ပြင်ပစတူဒီယိုများသည်အဆိုပါဖောက်ပြန်သောစနစ်များထက်ဂိမ်းကစားခြင်းကိုပိုမိုအာရုံစိုက်ရန်ဖိအားပေးနေသည်ဟုသတိပေးခဲ့လျှင်၎င်းမှလွတ်မြောက်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ဟုတ်တယ်၊ ဘယ်လ်ဂျီယမ်နိုင်ငံမှလုယက်သေတ္တာများရုပ်သိမ်းလိုက်သည်.
ဒီစနစ်နဲ့အတူသန်းပေါင်းများစွာသောဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းတွေအများကြီးကိုပြောနိုင်တယ်။ သူတို့အမြဲရှိနေပေမယ့် ပရီမီယံများနှင့်အရာကျနော်တို့ပရိတ်သတ်တွေဒါမှမဟုတ်အခမဲ့ဖြစ်သည် ၏အသစ်အဖြစ် တန်ခိုးနှင့်မှော် ၎င်းသည်အတော်လေး Chess Royale ဖြစ်သည်။
ယခု ကျနော်တို့တိုင်းတာကြည့်ဖို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်လိမ့်မယ် အဘယ်သူသည်ခက်ခဲထိမှန်လိမ့်မယ်။ PUBG Mobile သည်အနည်းငယ်ညစ်ပတ်နေပြီးအရာရာကိုထိမိသည့်နှုန်းသည်အရူးလုပ်နေသည်ကိုငါတို့သိပြီးဖြစ်သည်။ ကစားသမားအချို့သည်ပစ္စည်းအချို့ကိုယူရန်သူတို့၏ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကိုကုန်လွန်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
una ဒီအစိုးရကအရေးယူနိုင်ကြောင်းသတင်းကောင်း လုယက်သေတ္တာများနှင့်အနိုင်ရပေးဆောင်သောသူတို့အားဆန့်ကျင်။ ထိုအရာကသူတို့ဟာဒီနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေနဲ့ဘယ်လောက်နီးကပ်နေတယ်၊ တိုင်းတာဘို့စောင့်ဆိုင်းယခု။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » စပိန်အစိုးရသည်ဂိမ်းများ၏လုယက်သေတ္တာများအပေါ်အလေးအနက်ကန့်သတ်ထားလိမ့်မည်
Isaac silva ဟုသူကပြောသည်
Isaac Silva သို့ပြန်ပြောပါ
Realme6ကို Geekbench စာရင်းတွင် Mediatek ၏ Helio G90 ဖြင့်အတည်ပြုသည်